အမျိုးသားများအတွက်ဘို့နဲ့ Chris Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / Menswear / ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ / အမျိုးသားများအတွက်ဘို့နဲ့ Chris Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
The Chris Tee is an easy fit basic t-shirt style. ဂျာစီပိတ်ထည်များအတွက်သင့်လျော်သော. Pattern comes withalong or short sleeve.
အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်: S / M / L / XL
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး CHRIS TEE TUTORIAL here.
TEE: Copyshop အရွယ်အစား: 39cm x 82cm / A4 Pages:6/ အမေရိကန်ပေးစာ: 6
LONG SLEEVE: Copyshop အရွယ်အစား: 31cm x 71cm / A4 Pages:6/ အမေရိကန်ပေးစာ: 6
SHORT SLEEVE: Copyshop အရွယ်အစား: 31စင်တီမီတာက x 31cm / A4 Pages:4/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
တွယ်အပ်, stitch and finish using zig-zag stitch or an overlocker.
Ease around the garment neckline. pin နှင့်အရပ်ဌာန၌ချုပ်.
£ 3.68 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်